फ्रिजमा कति समय खाना राख्ने - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
फ्रिजमा कति समय खाना राख्ने
अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर कतिपय ग्रामिण क्षेत्रमा पनि पनि फ्रिजमा खानेकुरा राख्ने चलन बढ्दै गएको छ । फ्रिजमा कुन खानेकुरा कति समयसम्म स्टोर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको धेरैलाई जानकारी हुँदैन । त्यसैले, कोही–कोही त महिना दिनलाई पुग्ने खानेकुरा ल्याएर राखेका हुन्छन् । खानालाई धेरै दिनसम्म फ्रिजमा राखियो भने उक्त खानेकुरा सुरक्षित भन्दा पनि विषाक्त बन्न सक्छ । कुन खानालाई कति दिनसम्म फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्दा राम्रो हुन्छ त्यो कुरा फ्रिजमा खानेकुरा राख्ने प्रत्येक ब्यक्तिले थाहा पाउनै पर्छ ।
यदि पनिरलाई हप्ता दिनसम्म स्टोर गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने डिब्बामा पानी राखेर त्यसमा डुबाएर राख्नुहोस् ।
हामी प्रायःले रोटी ताजा नै खान मन पराउँछौ । तर, तपाईले गहुँको रोटी एक हप्तासम्म फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ । स्टोर गरेको रोटीलाई घिउ हालेर तताएर खाना सक्नुहुन्छ । तर, याद राख्नुहोस्, ताजा रोटीको जस्तो पौष्टिक तत्व फ्रिजमा राखेको रोटीको हुँदैन । त्यसैले रोटी पकाएको १२ देखि १४ घण्टा भित्र खाइसक्नु राम्रो हुन्छ । लामो समय फ्रिजमा राखेको रोटीले पेटमा असर गर्न सक्छ ।
कोही–कोहीले घरि घरि पकाउन अल्छी मानेर एकै पटक धेरै भात पकाएर फ्रिजमा राख्छन् । पछि त्यो खानालाई फ्राई गरेर खाने चलन रहेको छ । तर फ्रिजमा भात दुई दिन भन्दा बढी नराख्नु होस् । दुई दिन भन्दा बढी फ्रिजमा राखिएको खानामा पौष्टिक तत्व रहँदैन । धेरै दिन फ्रिजमा राखिएको भात खाएमा तपाईको पेटमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
दाल एकदमै पौष्टिक तत्व हो । यो तपाईले ताजा खानु भएमा अझ पोषिलो हुन्छ । यदि खानामा दाल बाँकी भएमा यसलाई दुई दिन भन्दा बढी समय फ्रिजमा राख्नु हुँदैन । धेरै दिन फ्रिज गरी राखेको दालमा पनि पौष्टिक तत्व हुँदैन । यसले तपाईंको पेटमा ग्यास जम्मा हुन सक्छ ।
कुनै पनि फललाई काटेपछि ६ देखि ८ घण्टामा खानु उपयुक्त हुन्छ । तर यदि केही गरी त्यो खाना सकिएन भने तपाईले त्यो फलफूल फ्रिजमा जम्मा गरेर राख्न सक्नुहुन्छ । त्यो फलफूल कति समय फ्रिज गरेर राख्ने त ? काटेको स्याउ ४ घण्टा भित्र खानु राम्रो हुन्छ भने मेवा ७ घण्टा भित्र खाई सक्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईले काटेको कुनै पनि फलफूल ८ घण्टा भन्दा बढी फ्रिज गरेर राख्नुभयो भने यो फलफूल विस्तारै विष बन्दछ, जसले तपाईको शरीरलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ ।
पनिर एकदमै पौष्टिक दुधजन्य खाने परिकार हो । यो परिकार प्रायः शाकहारीले रुचाउँछन् । पनिरलाई कति समयसम्म फ्रिजमा स्टोरेज गरेर राख्ने त ? तपाईले कोठाकै तापक्रममा राख्नु भएको छ भने एक दिनमा र फ्रिजमा स्टोरेज गरेर राख्नु भएको छ भने दुई दिन भित्र खाई सक्नुपर्ने हुन्छ । यदि पनिरलाई हप्ता दिनसम्म स्टोर गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने डिब्बामा पानी राखेर त्यसमा डुबाएर राख्नुहोस् ।
खाजाको परिकार मध्ये ब्रेड प्रचलित खाजा हो । ब्रेडलाई सफा डिब्बामा र पेपरमा र्‍याप गरेर स्टोरेज गर्नुपर्छ । यसरी फ्रिजमा राखेको ब्रेड दुई दिनसम्म खाना सकिन्छ ।